Qaraxyo Iyo Dagaallo Ka Dhacay Deegaanno Ka Tirsan Jubbooyinka. – Bogga Calamada.com
Qaraxyo Iyo Dagaallo Ka Dhacay Deegaanno Ka Tirsan Jubbooyinka.
Ciidamada xarakada shabaabul Mujaahidiin waxay saacadihii lasoo dhaafay weeraro toos ah iyo kuwa qaraxyo ah oo khasaare kala duwan dhaliyay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana soo baxaya warar faahfaahsan oo ku aadan howlgalladaas.
Weerarka hore oo ahaa dagaal toos ah waxay Mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ka samaysteen degmada Afmadow oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose waxayna ciidamada shabaabul Mujaahidiin dhowr jiho ka weerareen saldhigga ciidamada dowladda.
Weerarka kale waxay ciidamada jamhadda Mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Jubbaland ay ka samaysteen deegaanka Yoontoy oo ka mid ah deegaammada dhaca duleedka magaalada Kismaayo.
Dagaalkan oo ahaa mid culus waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira oo lasoo wariyay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo maleeshiyaadka maamulka Axmed Madoobe lagu gaarsiiyay dagaalka.
Dhanka kale warar dheeraad ah waxay kasoo baxayaan qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan ciidamada dowladda lagula eegtay deegaanno dhaca duleedka magaalada Kismaayo qaraxyada oo gaarayay illaa 2 qarax oo culus waxay Mujaahidiintu si gaar ah kaga fuliyeen inta u dhaxaysa deegaamada Baarsanguuni iyo Singaleer ee duleedka magaalada Kismaayo.
Ilo wareedyo masuul ah waxay xaqiijiyeen in qaraxyadan oo lala beegsaday maleeshiyaad iyo saraakiil sare oo ka tirsan kooxda Farmaajo oo lug ah ay ku dhinteen 2 askari halka sidoo kalena uu dhaawacu yahay 5 kale.